Abanye - iZishan Group
I-Jiangsu Zishan Biological Co, Ltd. (NEEQ: 836539) yasekwa nge-9 kaMeyi ka-2012 nguFujian Zishan Group Co., Ltd. eyona nto iphambili kushishino kwezolimo, enye yeenkampani ezilishumi zokutya okusemathinini e-China, kunye ishishini eliphambili kushishino lokutya lwesizwe. Ukudala imali. Yinto eqhelekileyo ukuba iqela laseZishan lizinikele ekusebenziseni itekhnoloji yale mihla yokuphuhlisa ezolimo zale mihla. Inkampani iceba ukwazisa ngezixhobo eziphambili kunye netekhnoloji yokwakha iZishan Edible Mushroom Silicon Valley Industrial Park e-China kwiminyaka emi-3-5.
Le projekthi ikwicala lasentshona leSanhe Idolophu, iSithili saseHongze, isiXeko saseHuai'an, esaziwa njenge "Pearl yaseHuaishang" kunye "noMhlaba weNtlanzi kunye nelayisi" Le zokuhamba Kulula kakhulu. Indawo inemozulu eyahlukileyo unyaka wonke, inemvula eninzi kwaye iqondo lobushushu lonyaka li-14 ° C. Ikwacebile kakhulu kubutyebi bamanzi. Ngaphantsi kweekhilomitha ezi-3 ukusuka eHongze Lake. Ummandla unendawo ekumgangatho ophezulu wokutyala ingqolowa nerayisi engama-600,000 mu, kunye nenani lonyaka lokufuya iinkukhu Ngaphezu kwezigidi ezili-15, iindiza zengqolowa ezikumgangatho ophezulu kunye nomgquba wenkukhu zibonelela ngezinto ezaneleyo zokuvelisa imveliso yefektri ye-Agaricus bisporus. Inkampani iceba ukutyala imali iyonke eyi-500 yezigidi ze-yuan kwiihektare ezingama-500 zomhlaba. Emva kokugqitywa kweprojekthi, imveliso yonyaka yeAgaricus bisporus iitoni ezingama-35,000, ezinokuvelisa iitoni ezingama-20 000 zeAgaricus bisporus enkonkxiweyo kunye namakhowa anetyiwa. Ingeniso yokuthengisa iya kuba yi-500 yezigidi ze-yuan, inzuzo kunye nerhafu ziya kuba yi-25 yezigidi ze-yuan, imisebenzi ye-800 iya kubonelelwa, kwaye ama-2500 amafama atyebe.
Le projekthi ixhaswa kakhulu kwaye ikhathalelwa ngoomasipala bengingqi, izithili kunye neekomiti zeqela leedolophu kunye namasebe karhulumente. Isigaba esilandelayo kunye nesigaba sesibini seprojekthi sityale i-yuan yezigidi ezili-150 kwiihektare ezingama-323 zomhlaba, kwaye bakhe iitoni ezili-15 zolawulo lobushushu oluzenzekelayo olumanzi lwe-mushroom yokutyala amakhowa. izigaba, kunye nendibano yocweyo yamakhowa etyuwa. Igumbi elinye le-boiler, iziko elinye lokuhambisa amandla, iworkshop enye yokwenza umhlaba, indawo yokugcina enye, kunye negumbi elinye lokugcina iibhaktheriya. Igumbi elinye lokupakisha kunye nendawo yokugcina ebandayo, indawo enye yokupholisa kunye nokufudumeza. Inqanaba lesibini leprojekthi lagqitywa ngeyoMsintsi yowama-2015 laza lafakwa ngokusemthethweni kwimveliso. Iprojekthi yenqanaba lesithathu lepaki yemizi-mveliso iceba ukwakha ngokutsha imigca emi-3 yemveliso yokutya kubandakanya i-bisporus mushroom kunye nomgca wayo wokuvelisa imveliso, kunye nokwakha indlu entsha yokutyala amakhowa yeemitha zesikwere ezingama-32,000, ezinokuqhuba iitoni ezili-15,000 ze-mushroom ye-bisporus kunye nokunye ukutya ngonyaka. Emva kokuba iprojekthi igqityiwe ngokupheleleyo, kuqikelelwa ukuba imveliso yonyaka ye-Agaricus bisporus iitoni ezingama-35,000, i-Agaricus bisporus enkonkxiweyo kunye neetoni ezingama-20 000 zamakhowa e-brine anokuveliswa, kwaye amafama angama-2 500 atyebe. Okwangoku, ukwakhiwa kwendlu yokutyala amakhowe enqanaba lesithathu kunye nemveliso yonyaka yeetoni ezingama-4000 zebisporus sele iqalile, kwaye neeprojekthi ezinzulu zokulungisa ezinje ngamakhowa enkonkxiweyo kunye nejusi egxile kuyo nayo igcwele ngokupheleleyo.